Manchester United oo ka hadashay macluumaadkeedii Internet-ka ee la jabsaday & Inay arrintaasi saameyn ku yeelanayso kulankeeda caawa ee West Brom – Gool FM
Manchester United oo ka hadashay macluumaadkeedii Internet-ka ee la jabsaday & Inay arrintaasi saameyn ku yeelanayso kulankeeda caawa ee West Brom
Haaruun November 21, 2020
(Manchester) 21 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa xaqiijisay inay burcadda Internet-ka ay jabsadeen macluumaadkii u keydsanaa ka hor kulanka ay caawa la ciyaareyso naadiga West Bromwich Albion.
Red Devils oo qiratay weerarka lagu soo qaaday macluumaadkeeda ayaa sheegtay inay burcaddu ku guuldarreysatay la bixitaanka xogaha taageerayaasha iyo macaamiisha, inkastoo ay gudaha u galeen dhammaan wixii ugu keydsanaa internet-ka.
Qoraal ay Man United boggeeda ku baahisay ayay ku sheegtay in khubarro dhanka burcadda internet-ka ah ay kala tashanayo baaritaan ku aaddan dhacdadan.
Man United ayaa bayaan ay ku xaqiijinayso in burcadda Internet-ku u dhacday Macluumaadkeeda waxa ay ku tiri: “Kooxdu waxa ay qaadday Tallaabo kaddib weerar dhicana Internet-ka ah oo lagu soo qaaday, waxaana ay waqtigaan la shaqeynaysaa khubarada baaritaanka ku sameynaya falkan, si loo yareeyo qaska dhinaca IT-ga ah ee xilligan socda.
“Waxa uu ahaa howl-gal adag oo ay soo abaabuleen, burcadda dambiilayaasha ah ee Internet-ka, haddana waxa ay kooxdu leedahay hannaan xeel dheer iyo hab looga gaashaamanayo dhacdooyinka cayn kaan oo kale ah, waana lagu soo tababaray halistaan oo kale.
“Qeybteenna u xil saaran difaaca Internet-ka ayaa xaqiiqsaday in weerar lagu soo qaaday, waxaana ay damiyeen goobihii weerarka looga soo qaaday, looga baaqsado dhaawac, loona ilaaliyo xogteenna.
“Kannaallada warbaahinta kooxda, sida Website-ka iyo Application-ada wax saameyn ah kuma yeelan arrintan, balse illaa iyo hadda ma ogin in loo dhacay macluumaadkeenna la xiriira Jamaahiirta iyo macaamiisheenna”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda kubadda cagta Manchester United, waxa ay xaqiijisay in burcaddu aysan awood u yeelan inay helaan xogta kulanka ay caawa wajahayaan West Brom, isla markaana ay wax waliba u socon doonaan sidii loo qorsheeyey kulankuna uu qabsoomi doono.
RASMI: Erling Braut Haaland oo ku guuleystay abaal-marinta Golden Boy 2020